ဒါကြောင့်သင်ကယဉ်ကျေးမှုသင့်လျော်သောကြောင့်, သင်တော့ဘူး HOOPS ဝတ်ဆင်လို့မရပါဘူး - သတင်း
ဒုဆောင်းပါးထုတ်ဝေခဲ့သည် - ' Hoop နားကပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘဲသင်၏လမ်းကြောင်းမှန်ဖြစ်သည် ''
ဤအပိုင်း၌လက်တင် - သြစတြေးလျစာရေးဆရာ Ruby Pivet က 'လူနည်းစုများသည်ခုခံခြင်းနှင့်အင်အား၏သင်္ကေတများအနေဖြင့်ဝတ်ဆင်ခြင်း' ဖြစ်ပြီးသူမ၏အငြင်းပွားမှုမှာလူဖြူများသည်သူတို့ကို ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ခြင်းမပြုသင့်ဟုရှင်းပြသည်။
သူမကသူမအဖြူရောင်မော်ဒယ်များကို Instas တွင်မဝတ်မီအရောင်ရှိသောအမျိုးသမီးများသည်ခါးပတ်များကိုဝတ်ဆင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ပတ္တမြားကဤသို့ဆိုထားသည် - 'အရောင်အသွေးစုံလင်သောမိန်းမအများစုအတွက်၊ ကွင်းများသည်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းများတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ ၀ တ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကို 'အမှိုက်ပုံး' အဖြစ်မြင်ကြပေမယ့်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးတွေ ၀ တ်ဆင်တဲ့အခါသူတို့ကို 'အေးဆေး' ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြင့်ဖက်ရှင်တွေအဖြစ်မြင်ကြပါတယ်။
ဒီနောက်မှလာ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကောလိပ်၏နံရံများပေါ်တွင်လက်တင်ကျောင်းသားများသုံးယောက်သည် hooped နားကပ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းစကားကိုခြယ်သခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာ 'အဖြူရောင်မိန်းကလေးတွေ၊ မင်းရဲ့ကြိုးတွေကိုချွတ်ပါ' ဆိုပြီးဖတ်တယ်
avatar နောက်ဆုံးလေထု bender ပဟေ.ိ
ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် hooped နားကပ်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့် wokeness Bible, ID သည်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။ '' ဘယ်သူကကွင်းနားကပ် '' သူတို့ရဲ့စာဖတ်သူတွေရန်။
နောက်ဆုံးတွင်ဆောင်းပါးသည်ဖက်ရှင်အားလူ့အဖွဲ့အစည်းကအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးထားပုံနှင့်ကွင်းဆက်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြdiscussနာကိုဆွေးနွေးထားပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်သောအမျိုးသမီးများသည် 'ghetto' ဟုမခေါ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုမဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
တွစ်တာကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေခြင်းကလူများကသဘောတူသည်မှာ Hoops ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုသည်သင်မလုပ်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါဟု ppl သိရှိပါသလား။ သင့်၏ဖိနပ်များကို ၀ တ်ဆင်ပါ
- ကလေးအမေ (@derpnessa) ဇွန်လ 10, 2017
ဒါဟာ simp ဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူး
ငါသည်ငါ့ $3hoops ယခု $ 16 ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်တိုင်အောင်, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင့်လျော်သောအချို့ BS ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်လေ့ရှိတယ်
- ဂျနီဖာ Gonzalez (@thejenngonzalez) ဇွန်လ 19, 2017
Ive hoops အတွက် yts ယဉ်ကျေးမှုသင့်လျော်သောဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Woc 'ghetto' လို့မခေါ်ရပါဘူး။ ၀ တ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ ၈၀ ပေးရမယ်။
-? (@gret_ch_en) ဇွန်လ 14, 2017
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ များစွာသောအားဖြင့် hoops များ ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်မည်သို့ထိခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးနေသည်။
ဒါကြောင့်ပုံကြိုးတွေပုတီးဝတ်ဖို့အခုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင့်လျော်သောလား? ငါတကယ်နားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့် hoops dreadlocks?
- sophs (@emeraldiness) မတ်လ 12, 2017
- ချယ်လ်ဆီး (@_itslegit) မတ်လ 29, 2017
- ً (@egyptiful) သြဂုတ်လ 6, 2017
- ပေးခဲ့သည် (@badcxmpany) မတ်လ 14, 2017